सुत्केरीलाई पोषण खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै वडा नं. २६ का जनप्रतिनिधिको पदस्थापन - Parichaya.com
By परिचय	 On १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १८:०१ 0
नेकपा एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएर पराजित भएका सुर्यनाथ भण्डारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजनितिको घेरा भन्दा माथि उठेर समन्यायिक विकासमा जोडदिन आग्रह गरे ।
स्वतन्त्र उमेदवार नारायण लामिछानेले मुलुकमा युवा पुस्ताबाट जनताले आशा गरेको उल्लेख गर्दै, वडा नं. २६ मा परिवर्तन हुने आशा रहेको बताए । यसैगरी पदस्थापन पछि वडा कार्यालयका कर्मचारीसँग नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सेवा प्रवाह लगाएका बिषयमा छलफल गरेका थिए ।
वडा सदस्यहरु लक्ष्मी देबी भट्टराई, तिर्थवहादुर राजभाट, सुदिपराज ढुंगाना र सुजता बराल सुनारले जनताको काम छिटो छरितो गर्ने वातावरण मिलाउन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । वडा सचिव मीना भट्टराई भण्डारीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यले वडाका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिने बताईन ।